Bixinta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga
Adkeysi: Warbaahinta Bulsho ee Dibadda Loogu Sameeyay Si Wanaagsan
Kaqeybgalka warbaahinta bulshada waxay howl culus ku noqon kartaa shirkad yar. In kasta oo aan ka firfircoon ahay dhinaca tilmaamidda shaqsi ahaaneed, haddana si daacadnimo ah ugama aynaan dhigin istiraatiijiyad adag iyo ilo ilo ku aaddan joogitaanka warbaahinta bulshada ee shirkadaha. Taasi way is beddeleysaa tan maanta, in kastoo, markii aan kor u qaadnay isticmaalka Adkeynaya si loo kobciyo hay'adaheena soo socda.
Waxaan ku tijaabiney qaar ka mid ah warbaahinta bulshada oo loo diro si aan u xoojino wada sheekaysigeena khadka tooska ah, laakiin si daacadnimo leh weligood si fiican uma ay socon. Waxaan badanaaba helnay cusbooneysiin cabsi leh, soo-saaritaanno liita oo liita, iyo wadar guud oo qashin ah. Bixinta 'Emphatic' waa, midna, waa kii ugu fiicnaa ee aan aragnay illaa iyo hadda. In kasta oo aysan ahayn istiraatiijiyad guud ee warbaahinta bulshada, haddana adeeggu wuxuu udub dhexaad u yahay yoolalkaaga guud. Yaad dooneysaa inaad ku abuurto wacyigelin (rajo, saamayn, macaamiil), maxaadse ka rabtaa inay sameeyaan?
Adeeggu wuxuu u kala baxaa seddexda tallaabo ee soo socda:
Dhis astaan ​​- La wadaag qaar ka mid ah macluumaadka aasaasiga ah Adkeynaya oo waxay u abuuri doonaan astaan ​​gaar ah nuxurka astaantaada.
Hel wararkaaga cusub - Qorayaasha fadhigoodu yahay Mareykanka waxay abuuri doonaan oo kuu soo diri doonaan waxyaabo la yaab leh oo ku saabsan warbaahinta bulshada toddobaad kasta.
Dib u eegis iyo jadwal - Dib u cusbooneysii cusbooneysiinta ka dibna Adkeynaya iyaga dhejin doonaa iyaga shabakadaha aad u.
Macluumaadka la qabtay si loo habeeyo istiraatiijiyaddaada macluumaadka waa mid dhammaystiran. Laga bilaabo sharraxaadda shirkaddaada iyo macaamilka ku habboon, waxaad ku darsaneysaa dhammaan xisaabaadkaaga bulsheed, ku dar xisaabaadka bartilmaameedka ah ee macaamiisha, saamileyaasha, ama xiriirada, hagaaji inta ay ka kooban tahay waxyaabaha dibadda ama waxyaabaha gudaha ah ee aad rabto inaad wadaagto, waxaad siisaa ilaha ugu sarreeya ee lagu dari karo iskudhafka, iyo mowduucyada aad diirada saareyso. Xitaa waad dejin kartaa codkaaga - ha ahaato mid aan rasmi ahayn ama mid rasmi ah.
Haddii aad tahay wakaalad, waxaad abuuri kartaa astaamo macmiil badan, xulo qorshe ballaaran, ka dibna la jaan qaado macmiil kasta waxyaabaha uu ka kooban yahay bulshada oo u qoondee inta jeer ee cusbooneysiinta.
Isku day Tixraac Si Bilaash ah!
Kani Ma Dejin Oo Ha Iloobin
Maskaxda ku hay in tani kaliya kaa caawinayso inaad hesho, saxto, iyo isku xirnaanta isticmaalka koontadaada warbaahinta bulshada. Shaqaalaha wakaaladeena ayaa wali ku wadaagaya cusbooneysiinta marinadayada shirkadaha, la wadaagaya cusbooneysiinta macaamiisheenna iyo guushooda, waxaanna kormeeraynaa warbaahinta bulshada si aan uga jawaabno wixii codsi ah. Qalab sida Adkeynaya looma jeedin inaad beddesho dhammaan istiraatiijiyaddaada warbaahinta bulshada; waxay u joogtaa in lagu kordhiyo.
Shaacinta: Waxaan u adeegsaneynaa sumadeena kor u qaadista shaqsiyeed Adkeynaya, kaas oo dhibco siinaya koontadayada haddii aad isqorto.
Tags: xoojinka baxsan bulshadaka baxsan warbaahinta bulshadacusbooneysiinta warbaahinta bulshadabixinta warbaahinta bulshada
La wadaag Buugaagta Suuqgeynta Aad Ugu Jeceshahay Adiga oo Dhegeysta